Hevitra tsara indrindra handravahana ny lohan'ny fandrianao | Bezzia
Hevitra tsara indrindra handravahana ny lohan'ny fandrianao
Pau Heidemeyer | 03/04/2021 16:00 | an-trano
Raha te-hanome fikitika hafa ny efitranonao ianao Saingy tsy hainao ny manao azy amin'ny fomba tsotra mba hanome anao ny valiny tsara indrindra, azonao atao amin'ny fanovana ny lohan'ny fandriana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny fomba hanaovana ny efitrano fandrianao ho hafa manavao ny lohan'ny fandrianao fotsiny.
Ny efitrano fatoriana dia iray amin'ireo toerana ao an-trano izay tsy ekeny ny fanaka be. Ny singa afovoany dia ny fandriana, arahin'ireo kabinetra, fitafiana ary latabatra eo am-pandriana. Miankina amin'ny karazana efitrano fandriana, raha tanora kokoa izy dia hanana birao, etsy ankilany, ny efi-trano lehibe dia tsy matetika manana singa maro.
Noho io antony io dia ho fantatsika ny hevitra tsara indrindra hanovana ny lohan'ny fandrianao ary hanome azy fikitika hafa. Araka izany, andao hahalala hevitra vitsivitsy handravahana ny lohan'ny fandrianao ary avadiho ho ao amin'ny toerana tianao indrindra ny efitranonao.
Miankina amin'ny haben'ny efitranonao dia azonao atao ny manampy seza misy tratra na tratrana vatam-paty hamenoana ny toerana foana, na izany aza, tsy azo atao foana izany. Izany no antony ahafahan'ny lohan-dohan'ny fandriana hiakatra eo afovoany ary hanome azy io mikasika azy manokana.
1 Ataovy ny efitrano fandrianao ny toerana mahafinaritra indrindra
2 Safidio ny saron-doha tonga lafatra ho an'ny fandrianao
2.4 Miaraka amin'ny latabatra fandriana anatiny
3 Hevitra handravahana ny lohan'ny fandrianao
3.1 Takelaka misy sarina sary
3.2 Takela-by azo ampiasaina
3.3 Headboard miaraka amina rindrina
3.4 Talantalana na talantalana mifangaro
Ataovy ny efitrano fandrianao ny toerana mahafinaritra indrindra
Zava-dehibe ny matory amin'ny tontolo mahafinaritra, noho ny antony maro, fa ambonin'izany rehetra izany dia mankafy ny tombony azo amin'ny fitsaharana tsara. Ny headboard dia afaka mandeha lavitra amin'ny fahazoana ilay efitrano mahafinaritra sy mahafinaritra.
Raha manana efitrano mafana sy mahafinaritra isika dia hahazo tombony maromaro: mieritrereta tsara, mihetsika haingana, manatsara ny fitadidy sy ny fifantohana. Ny torimaso ratsy dia tsy misy fiantraikany amin'ny fiasan'ny vatantsika ankapobeny, fa koa manelingelina ny kalitaon'ny fiainana, ny fiaraha-monina, ny asa ary ny fifandraisan'ny mpianakavy.
Mba hananan'ny efitranonao atmosfera tsara indrindra sy mahafinaritra araka izay azo atao, mariho ireto torohevitra ireto:
Misafidiana alokaloka izay mitaona ny filaminana. Anisan'izany ny feo maivana fasika sy ny lokon'ny tany. Wood dia manome antsika kalitao be dia be ary mifanohitra tsara amin'ny beige, manga ary maitso.
Misafidiana jiro izay manana loko mena ary manahaka ny filentehan'ny masoandro. Ho an'ity dia tsy maintsy mampiasa jiro ankolaka amin'ny solaitrabe ianao.
Mampiasà karipetra vita amin'ny akora misy firafitra mahafinaritra toy ny landy na volon'ondry.
Diniho bebe kokoa eo am-pandriana. Amin'ity tranga ity, eo amin'ny headboard, na dia tokony hitandrina tsara amin'ny curvature ny lamosinao aza ianao ary maivana sy landihazo ny lamba firakotra.
Safidio ny saron-doha tonga lafatra ho an'ny fandrianao
Mora tokoa ny very any amin'izao rehetra izao amin'ny headboard. Betsaka ny karazany ary manintona ny ankamaroany ka irinay ny manandrana azy rehetra. Fa araka ny nolazainay, tsy maintsy ho hitantsika foana ny fomban'ny tranontsika mba tsy hifandona.
Etsy ankilany, angamba manome ny fifandraisany bebe kokoa amin'ny fomba sy ny hatsarana isika fa tsy amin'ny fiasan'ny headboard. Samy manan-danja ihany izy roa.
Raha tianao ho tsara endrika kokoa ny efitranonao, ary koa ho voaro tsara amin'ny tabataba, miaraka amin'ny loko tsara tarehy amin'ny rindrina sy ny fampiononana rehetra, dia tadidio ireo lafin-javatra ireo.
Zava-dehibe ny fiheverana izay fitaovana nampiasaina tao amin'ny efitrano fandriana. Miankina amin'ny tsironao sy ny tetibola ho karazany iray na hafa izy ireo. Ny hazo dia ireo izay manome antsika fahatsapana hafanana indrindra, etsy ankilany, azonao atao ny mampiasa ireo vy.
Izy io dia solaitrabe izay ampahany amin'ny rafitry ny fandriana na iray izay ividiananao misaraka. Ny takelaka sy ny farafara dia mety tsy hitovy na tsy mifamenoNa izany aza, afaka mamorona effets visuels tena tsara.
Aza matahotra àry raha tsy mitovy amin'ny farafara ny takelakao, dia mety ho ilay fikasana ilain'ny efitranonao io.
Azonao atao ny misafidy kofehy voajanahary toy ny landihazo na rongony, satria tena vaovao ny vokany. Toy ny amin'ny hazavana hazavana mba hifanaraka kokoa amin'ity karazana lamba ity.
Raha misafidy kofehy sentetika ianao dia ho mora kokoa ny manadio sy mahatohitra kokoa. Etsy ankilany, ireo izay manana endrika volory dia hanome azy endrika mahazatra sy mihaja kokoa. Azonao atao koa ny manampy bokotra, toy ny style button na studs amin'ny sisiny.
Miaraka amin'ny latabatra fandriana anatiny
Azonao atao ny misafidy headboard izay efa misy jiro eo amin'ny latabatra fandriana tafiditra, izany dia hanome endrika miaraka amin'ny fampiasa. Inona koa, ianao dia hisoroka ny jiro tsy haka toerana amin'ny latabatra fandriana.
Hevitra handravahana ny lohan'ny fandrianao
Manaraka izany, milaza aminao izahay ny hevitra tsara indrindra handravahana ny takelaka eo am-pandrianao. Amin'ity fomba ity dia hahazo fomba hafa ao amin'ny efitranonao ianao amin'ny fomba tsotra.
Takelaka misy sarina sary
Hevitra tena maoderina izay ampiasaina matetika. Ny sary, sary na sary dia apetraka amin'ny toerana alehan'ny solaitrabe, apetaka amin'ny rindrina. Ny sary dia hifantoka.
Ny sisa ataonao dia mifidiana tsara ny sary mba hirindra tsara ny rehetra.
Takela-by azo ampiasaina
Izy ireo dia tsara indrindra amin'ny fanatsarana toerana malalaka. Ireo takela-by ireo dia manana talantalana namboarina sy toerana fitahirizana, izay mahatonga azy ireo ho tonga lafatra ho an'ireo izay manana zavatra maro ao an-tranony. Araka izany, ho fanampin'izay, izy ireo dia ho afaka hanana izay rehetra ilaintsika mandritra izany fotoana fialan-tsasatra izany.
Headboard miaraka amina rindrina
Amin'ity tranga ity dia ny ampahan'ny rindrina ihany no azonao atao sary an-tsary raha tsy mifanaraka amin'ny loha-doha na rindrina iray manontolo mametra ny faritra lohan-doha miaraka amina antony hafa. Amin'ity tranga ity dia afaka misafidy ny taratasy mifanaraka amin'ny fombanao ianao ary ny idealy dia ny azonao ovaina im-betsaka araka izay itiavanao azy raha mbola mitandrina ianao rehefa manala azy.
Talantalana na talantalana mifangaro
Azonao atao koa ny manolo ny solaitranao amin'ny talantalana na talantalana na maromaro hananganana toy ny faritra fitahirizana. Azonao atao ny manamboatra talantalana tafiditra ao anaty rindrina hametrahana sary, zavatra amboarina na fahatsiarovana. Ho fanampin'izay, azonao atao ny mametraka jiro ao ka tsy mila mampiasa toerana eo ambony latabatra fandrianao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Hevitra tsara indrindra handravahana ny lohan'ny fandrianao
Tombony eco amin'ny trano bitika